ကောင်းကင်ဖြူ: ငါးထောင်တန်ဖုန်းအပေါ်အမြင် (တဂ်ပို့စ်)
မင်္ဂလာပါ ဒီအကြောင်းရာကို post လေးတစ်ပုဒ်လောက် ရေးချင်နေတာ ကြာပါပြီ ။ ရေးလည်း ရေးဖြစ်ပါတယ်လက်စမသတ် နိုင်တာနဲ့မတင်ဖြစ်ခဲ့ ဘူး ။ နောက်တော့ ကျနော် မကြာခဏ စာတွေဝင်ဖတ် လေ့ရှိတဲ့ ကို သက်တန့် ချို blog ကနေ အစပြုပြီး ဒီအကြောင်းရာ လေး တဂ် ပေးပြီး blogger တွေရဲ့ အမြင်ကို ရေးကြတာတွေ့ ရ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီမှာ …. ကျနော် မောင်ဘုန်း အရင်ကမှ ရေးချင်နေတဲ့ အကြောင်း ဖြစ်လို့ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန် လျှက် တဂ်ပေးမဲ့ သူကို လိုက်ရှာ မိပါတယ် ။
ခက်တာက မောင်ဘုန်း မှာလည်း blogger မိတ်ဆွေ ဆိုလို့လက်ဆယ်ချောင်းပြည့်အောင် မရှိ ပါဘူး ။ ထို ဆယ်ချောင်းမပြည့်အောင် ရှိတဲ့ blogger မိတ်ဆွေ အိမ်တွေ ကို တစ်ပတ် တစ်ခါ လောက် ရောက် မို့ကြိုးစားယူ ရပါတယ် ။
နောက်ဆုံးတော့ ကျနော်ရဲ့ မဟာမိတ် blogger အပျိုကြီး ( သမီးစံ) ထံ ချဉ်းကပ်ပြီး ။ အပျိုကြီးရေ … မောင်ဘုန်း ကို တဂ် ပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ရပါတယ် ။ အဲ့နေ့ ညမှာ ပဲ blog တွေ လိုက်ကြည့်ရင်း အန်တီတင့် တဂ် ထားတာတွေ့ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီ post လေးရေးခွင့် ရလို့အန်တီတင့် နဲ့အပျိုကြီး (သမီးစံ) ကို ကျေးဇူး တင်မိပါတယ် ။
မြန်မာ့ ဟန်းဖုန်း သမိုင်းမှာတော့ တန်းဖိုး အနည်းဆုံးလို့ပြောလို့ ရပါတယ် ။ ဒါပင်မဲ့ တန်ဖိုးနည်း ဆိုတဲ့ စကားရပ် နဲ့ကျပ်ငွေ နှစ်သိန်း ကို ယှဉ်ကြည့် မယ်ဆိုရင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ မရှိလောက်ပါဘူး … ။
နိုင်ငံသားတိုင်း လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတဲ့ အခွင့်ရေးတစ်ခုပါ ။ တိုင်းပြည်အကျိုး စီးပွားအတွက် နိုင်ငံသားတိုင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ တောင်းဆိုပိုင် ခွင့် အခွင့်ရေး ရှိပါတယ် ။ ကျနော်အနေနှင့် လည်း တောက်ခံ အားပေးပါတယ်။
ဒါပင်မဲ့ နိုင်ငံသား အခွင့်ရေး နဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ကို သုံးစွဲမယ် ဆို နိုင်ငံသား တိုင်း လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ တန်ဖိုး ကို နားလည် မို့ တော့ အရေးကြီးပါတယ် ။ ဟိုတလောက သတင်းတစ်ခု ဖတ်မိလိုက်ပါတယ် ။ တောင်ဒဂုံ မှာ ၅၀၀၀တန် ဖုန်ကတ်ရရှိရေး အတွက် စာရွက်ဖြန့် ဝေသူ အယောက် ၂၀ ကို ထိန်းသိမ်း ခံရတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းပါ ။ ထိုသတင်းမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းရာတွေ ခိုင်ခိုင်လုံလုံ ရေးထားတာတွေ့ ရပါတယ် ။ ဘယ်ရုံး ၊ နာမည် က ဘယ်သူ ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ် ။ ဒါပင်မဲ့ အခန်း​ (၂) ပုဒ်မ (၃၅၄) နိုင်ငံသား ​ရပိုင်ခွင့်​ကို ကျ​နော်တို့​ ချိုး​ဖောက်ခံ​နေရတယ် …. လို့၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ကို ကိုးကားပြီးရေးသားဖော်ပြ ထားပါတယ် ။
ဘယ်လို လွဲ သွားလည်းမသိပါဘူး ။ အခြေခံ ဥပဒေ တိုင်းမှာ အခန်း (၂) ဆိုတာ နိုင်ငံသား ဆိုင်ရာ ကို ဖော်ပြလေ့ မရှိပါဘူး ။
အထက်ပါ ကိစ္စကို ဥပဒေ အရကြည့်မယ် ဆိုရင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ စာမျက်နှာ ၁၅၀ အခန်း (၈) ပုဒ်မ ၃၅၄ (က) တွင် မိမိ ၏ ယုံကြည်ချက် ၊ ထင်မြင်ယူဆချက် များကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့် ၊ ရေးသားဖြန့် ဝေ ခွင့် ….. ရှိတယ် လို့ ဖော်ပြထားသလို ၊ ပုဒ်မ ၃၅၄ (ခ) မှာ ဆိုရင်လည်း လက်နက်မပါပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့် ၊ စီတန်း လှည့်လည်ခွင့် ရှိတယ် လို့ဖော်ပြထားပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ စကားလေး နည်းနည်းလောက်ရှည်ပါရစေ … ။ လူ ဆိုသည့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကွဲလွဲ တက်ပါတယ် ။ အဲ့ လို ကွဲလွဲ တက်သည်ကပင် လူသား ဆန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို ကွဲလွဲတဲ့ လူအများ ဖွဲ့ စည်း လုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာ အမျိုးမျိုး ကွဲလွဲ တက်သောကြောင့် အခြေခံမှု များ ၊ ဥပဒေ များထား၍ လုပ်ကိုင် ရပါတယ် ။ ဒါမှသာ ထို အဖွဲ့ စည်း ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် များ အောင်မြင်နိုင်မှာပါ … ။
ဒါကြောင့် ဥပဒေ ဆိုတာ ကြောင်းပြချက် ပေးမို့မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ပြည်သူရော အစိုးရပါ နားလည်ထားသင့်ပါတယ် ။ လူအများနှင့် ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ အစိုးရ နှင့် ပြည်သူ များ ဥပဒေ ကိုလေးစာ လိုက်နာမှ သာ ကျနော် တို့ မျှော်မှန်းတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီး ဖြစ်လာလိမ့်မယ် လို့ထင်မိပါတယ် ။ အခြေခံဥပဒေ အခန်း (၈) မှာပါရှိတဲ့ နိုင်ငံသား အခွင့် ရေးကို သုံးပြုမယ်ဆိုရင် ၊ ထို အခန်း (၈) မှာ ပါရှိတဲ့ နိုင်ငံသား တာဝန် ဆိုတာလည်း လိုက်မို့ အရေးကြီးပါတယ် ။
ထိရောက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ ။ ဦးဆောင်တဲ့ သူအတွက်လည်း ချီးကျူး မိပါတယ် ။ ပြည်သူ့ အစိုးရအနေနှင့် ပြည်သူ သဘောထားကို အသိမှတ်ပြုရမှာပါ ။ ပြည်သူ အတွက် ကျေနပ်လောက်တဲ့ ရလဒ် မျိုး ပြည်သူ့ လွတ်တော် မှာ ဆုံးဖြတ် နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့် မိပါတယ် ။
ဟုတ်ကဲ့ ….. ဝမ်းသာအားရ ကြိုဆို ပါတယ် ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ … ။ ငါးထောင်တန် ဖုန်း ဆိုတဲ့ စကားရပ် နေရာမှာ တန်ဖိုးနည်း ဆိုတာလေး ပြောင်းလဲ ရေးသားခွင့်ပြုပါ ။ တစ်ပုဒ် မ က ရေးခွင့်ပြုပါလို့ လည်းတောင်းဆိုပါရစေ ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး စနစ် အားနည်းချက် တွေကိုတော့ လူတိုင်း သိပြီးသာပါ ။ ယခု အချိန်မှာ အစိုးအနေနှင့် တိုင်းပြည်အတွက် တိုးတက် အောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာချက်အများ လည်း တွေ့ ရှိရပါတယ် ။ ထိုသို့ တိုးတက် သော တိုင်းပြည် ကို ဖော်ဆောင်ရာ မှာ အခြေခံ ကျသော ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်အတွက် လူတန်းစား တစ်ရပ်လုံး အသုံးပြု နိုင် တဲ့ တန်ဖိုးနည်း ဆက်သွယ်ရေး စနစ်ဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ် တယ်ဆိုတာကို အစိုးရအဖွဲ့ ဝင် စီးပွားရေး ပညာရှင်များ အတိကျ ကို သိကျမှာပါ ။
၁.၁၀ . ၂၀၁၁ ရက်စွဲပါ ပြည်သူ့ လွတ်တော် ကြေငြာ ချက်အရ မြန်မာ ပြည်မှာ လူဦးရေ ၆၀ .၃၈ သန်း ရှိတယ်လို့ သိ ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် လူတန်းစား တစ်ရပ် လုံး အသုံးပြု နိုင်တဲ့ တန်ဖိုးနည်း ဖုန်း ကို ဖော်ဆောင် မယ်ဆို၇င် ။ စီပွားရေး ပညာ အရ လူဦးရေ ၆၀.၃၈ သန်း ပါဝင် နိုင်မဲ့ အလွန်ခိုင်လုံတဲ့ ဈေကွက် ကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ ။ ဒီလို အလွန်ခိုင်လုံတဲ့ ဈေးကွက် အတွက် နည်းပညာ ၊ အရင်းနှီး ဆို လွယ်ကူ စွာဖော်ဆောင် နိုင်မဲ့ အနေထားရှိ ပါတယ် ။ အကျိုးအမြတ် အနေနှင့် ကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း လက်ရှိ ပြည်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဈေးကွက်များထက် အဆပေါင်းများစွာ သာလွန်တဲ့ ဈေးကွက်ကြီး တစ်ခု မလွဲမသွေ ဖြစ်လာ မှာပါ ။ တနည်း ပြောရရင် အစိုးရအနေ နဲ့နိုင်ငံသားပိုင်ဆိုင်မှု့ ကို မြှင့်တင်ပေးရာ ရောက်ပါတယ် ။ ဒါက ကျနော် နေနဲ့တန်ဖိုးနည်း ဖုန်း ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ကျနော် အနေ နဲ့မြင်မိ တဲ့ အမြင်ပါ ။
ပြည်သူ့အစိုးရ ဆိုတာ ပြည်သူ ပိုင်ငွေများ ကို အသုံးပြု ပြီး ၊ ပြည်သူ့အကျိုးစီပွား ကို ဖော်ဆောင်ရတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကောင်းကျိုး တစ်ခု တည်း ကို ကြည့်ပြီး လုပ်ဆောင်လို့မရဘူး ဆို ကျနော် အနေ နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ ကို နားလည် ပါတယ် ။ လူတန်းစာ တစ်ရပ်လုံး အသုံးပြု နိုင်တဲ့ တန်ဖိုးနည်း ဆက်သွယ်ရေး စနစ် ပေါ်ပေါက်လာ ခြင်း အတွက် ဆိုးကျိုး များကိုလည်း ထည့် စဉ်းစား ရမှာပါ ။ ဆိုးကျိုးများ လည်း ရှိလိမ့်မယ် လို့ထင်မိပါ ။
ဥပမာ တစ်ခု အနေနှင့် ပြောရ ရင်တော့ တန်းဖိုးနည်းဆက်သွယ်ရေး စနစ် ဟာ UG network ကို အားပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွား နိုင်ပါတယ် ။ ယနေ့ပြည်တွင်း UG အင်းအားစုဟာ ပြည်သူ့ လုံခြုံ ရေး ကို ခြိမ်းခြောက် နိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိပါတယ် ။ ပြည်သူ့အစိုးရ ဆိုသောကြောင့် ပြည်သူ့လုံခြုံ ရေးဟာ အစိုးရ လုံခြုံ ရေးလို့ပြောမယ် ဆိုရင် မမှားလောက်ပါဘူး ။
ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရများ ဟာ UG များအပေါ် ပတ်ဆို့ တားဆီးတဲ့ မှုဝါဒ ကို အသုံးပြုခဲ့ပင်မဲ့ ယနေ့အချိန်ထိ နှစ်စဉ် အကြမ်းဖက်ဖောက်ခွဲ မှု့ တွေ ရှိနေခြင်း ၊ ဒီလို ပိတ်ဆို့ တားဆီးတဲ့ နေရာမှာ UG network ကို အဓိကထား ပိတ်ထားခြင်းကြောင့် ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေး စနစ် ဟာ အရည်သွေးရော နည်းပညာ ပါ ထိခိုက် လျှက်ရှိပါတယ် ။
နောက်တစ်ခုက အစိုးရနှင့် ဆန့် ကျင်သဘောထား ကွဲလွဲ ရင် UG လို့သတ်မှတ်ထားခြင်း ကြောင့် တချို့ သော NGO အဖွဲ့များရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ ဟာ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး အတွက်ဆိုသော်လည်း ၊ သဘောထားကွဲလွဲ ရင် UG ဟု သတ်မှတ် ထားခြင်းကြောင့် UG အသွင်ဖြစ် လုပ်ဆောင်နေရတာကို လည်းဝမ်းနည်းစွာ တွေ့ မြင်ရပါတယ် ။ ဒီလို သတ်မှတ်ထားခြင်း ဟာ UG အင်အား စု ကိုမိုပို ကြီးထွားအောင်လုပ်ဆောင် နေသလိုဖြစ်နေပြီး ၊ ပြည်သူ့လုံခြုံရေး ကို အမှန်တကယ် ထိခိုက်စေတဲ့ UG များအတွက် အလွယ်တကူ အသွင်ပြောင်း နိုင်အောင် ဖော်ဆောင်ပေးသလို ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ် ။
နောက်တစ်ချက်က အစိုးရနှင့် သဘောထာကွဲလွဲ လို့လုပ်ရပါတယ် ဆိုပင်မဲ့ ။ အကြမ်းဖက်ဖောက်ခွဲ မှု့ ဖြစ်စဉ် အားလုံးလိုလို မှာ ပြည်သူ များသာ ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် အသက် ဆုံးရှုံး စေခြင်းကြောင့် ၊ ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရများ UG များအပေါ် ပတ်ဆို့ တားဆီးတဲ့ မှုဝါဒ ဟာ အစိုးရအဖွဲ့လုံခြုံရေး ကိုပဲ ကာကွယ် ပေးတာလို့မေးစရာ ဖြစ်နေပါတယ် ။
ဒါကြောင့် အစိုးရအနေ နဲ့တိုင်းပြည် တိုးတက်ရေး ဆိုတာထက် ပြည်သူ လုံခြုံရေးဟာ ဦးစားပေး အဆင့်မှာ ရှိပါသောကြောင့် ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရများ UG များအပေါ် ပတ်ဆို့ တားဆီးတဲ့ မှုဝါဒ အပေါ်မှာ ပြန်လည် သုံးသတ် သင့်တယ် လို့ထင်မိပါတယ် ။ ပြည်သူ့လုံခြုံ ကို အမှန်တကယ် ထိခိုက်စေသော UG အင်အား စုကို ဖယ်ရှားနိုင် မှ သာ ကျနော် တို့မျှော်မှန်းတဲ့ တိုးတက်သော နိုင်ငံ အတွက် အခြေခံ ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ် ကို ဖော်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို ၊ ဒီလို အခြေခံကျတဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ် အတွက် အရည်သွေးကောင်းပြီး တန်ဖိုးနည်း ဆက်သွယ်ရေး စနစ် ကိုလည်း ဖော်ဆောင် နိုင်လိမ့်မယ် လို့ထင်မိပါတယ် ။
ဒီ post လေးရေးမို့တဂ် ပေးသူများ နှင့် ကျနော် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း များ ခဗျာ ... ။ တဂ် ပေးထားတဲ့ ခေါင်း စဉ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ ကြောင်းရာတွေ ထည့်ရေးတယ်လို့ထင်သွားပါက ကျနော် မောင်ဘုန်း တောင်းပန်ပါတယ် ။ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့် ရှိတယ် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက် မှာ ကျနော် စိတ်ထဲ တွေးမိတာလေးကို ရေးမိ ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 9:32 AM
ချစ်စံအိမ် March 5, 2012 at 4:24 PM
mstint March 5, 2012 at 6:50 PM
တဂ်ပို့စ်လေးဖတ်ရင်း ဗဟုသုတတွေပါ ရသွားတယ် မောင်ဘုန်းရေ။
ကိုဘုန်းရေးတာ..ထိမိတယ်ဗျာ......အကိုးကားတွေနဲ့ ........ဗဟုသုတ တိုးသွားပြီဗျို့ ...
jasmine(တောင်ကြီး) March 6, 2012 at 1:15 AM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် March 7, 2012 at 12:36 AM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 7, 2012 at 7:00 AM
လူတိုင်းဖုန်းကိုင်နိုင်ဖို့ လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ။
အင်းခုတော့ ဘလော်ဂါတွေအားလုံး ဝိုင်းပြောကြတာပေ့ါ
သူတို့ဘဲ ကိုင်နိုင်လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲနော်
မဒမ်ကိုး March 8, 2012 at 1:45 AM
သများတဂ်ထားတယ်လေ ဟွန့်ကြာပေါ့း)))
မင်္ဂလာညချမ်းပါ သူငယ်ချင်းတို့ ရေ ….. မုန်း၍မဟူ ….. ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီ ပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းရာလေးတော့ စာရေးဆရာမကြီး ဂျာနယ်ကျော် မမလေး ရဲ့ ...
တစ်ခါက .... ဆော်လမွန်ကျွန်း ဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှု့ ထွန်းကားခဲ့တဲ့ မြို့ ပြတစ်ခုပါ ။ အဲ့ ကျွန်းမှာ နေတဲ့ လူတွေဟာ .... စိုက်ပျိုးမို့အတွ...
သြော် ….. နာရမည် ၊ အိုရမည် ၊ သေရမည် ….. လို့ဆရာတော်ဘုရားဟော စဉ်က ဘာမှ မခံစားရသလိုပဲ ။ အင်း ….. အခု လပိုင်း ကျန်းမာရေး နည်းနည်း ညံ့ လာ...
အရှေ့ သည်မှ စသည့် ခရီး ရောင်နီ သန်းလျှင် ညီညာ စဉ်လျှက် ဦးခိုက် အသွင် … ။ ပူရောင် သန်းလို့ရောင်နီ ရင့်ထိန် သွေ့ သွေ့ ဆ...
မရမ်းချောင်း အနာကြီးရောဂါဂေဟာအတွက် အလှုရှင်များ ဖိ...